Haddii aad haysato taxanaha Apple Watch 2 waxaad ka maqnaan doontaa watchOS 8 | Wararka IPhone
Haddii aad haysato taxanaha Apple Watch 2 waxaad ka maqnaan doontaa watchOS 8
Waxaan ku qanacsanahay in badankiinnu ay cad yihiin waa kuwee aaladaha ka hadhay nooca cusub ee nidaamka hawlgalka watchOS 8. Laakiin sidoo kale waxaa jira isticmaaleyaal badan oo cusub oo u imanaya dunida Apple iyagoo uga mahadcelinaya aaladdan ama ka fikiraya inay iibsadaan mid, waana sababta maqaalkan diiradda loogu saaray.
Taxanaha Apple Watch 2 si fiican buu u shaqeeyaa markan iyo xataa haddii ay haystaan ​​watchOS 6.2 nidaamkii hore ee hawlgalka wax dhibaato ah oo qaliin ma laha. Marka Apple ay go'aansato inay sii dayso nooca 8 ee OS waxay ka bixi doonaan cusboonaysiinta.
Apple Watch Series 2 wuxuu ka yimid Sebtember 2016
Dhammaan moodooyinka waxay la jaanqaadi doonaan nooca cusub sidaa darteedna Apple waxay si toos ah ugu goynaysaa qaybtan saacad la soo bandhigay Sebtember 2016, shaki la'aan waqti ka badan oo macquul ah oo loogu talagalay isticmaaleyaasha inay beddelaan moodalka ama si fudud ugu raaxeystaan ​​faa'iidooyinkooda iyagoo aan sheegan wax ka badan waxa ay tahay hore u bixisay. Waana taas in aan la aqbalin nooca cusub ee nidaamka qalliinka micnaheedu ma aha in aaladdu shaqadii joojiso, tani waa wax wali adeegsadayaal badan aysan si buuxda u fahmin.
Dhanka kale, haddii ujeeddadaadu tahay inaad gasho adduunka Apple Watch oo aad iibsato mid, dabcan waxaan kugula talineynaa nooca ugu dambeeya ee la heli karo ee saacadda ama xaalad kasta haddii aadan rabin inaad wax badan ku qarashgareyso nooca Taxanaha 6 , waxaa ugu wanaagsan in lagu boodo nooca SE oo aad u qiimo jaban. Waxaad sidoo kale sugi kartaa inaad dhacdo maadaama Apple laga yaabo inay sii deyso taxanaheeda cusub ee 7In kasta oo aysan jirin warar xan ah oo ku saabsan hadda, haddana moodalka cusub ee daawashada ayaa diyaar u noqon doona in la bilaabo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Haddii aad haysato taxanaha Apple Watch 2 waxaad ka maqnaan doontaa watchOS 8
Fikradani waxay muujineysaa iPhone 13 oo leh darajo hoose iyo kamarad ka fiican
Anigu kama helayo ogeysiisyada WhatsApp-ka qoraallo la duubay